संसद विघटनपछि लगानीकर्ता आत्तिएर सेयर बेच्दा ९६ अंकको पहिरो! – ramechhapkhabar.com
संसद विघटनपछि लगानीकर्ता आत्तिएर सेयर बेच्दा ९६ अंकको पहिरो!
काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेसँगै दोस्रो बजारमा ९६ अंकको पहिरो गएको छ। संसद विघटनसँगै आइतबार नेप्से सूचक ९६.८८ अंकले गिरावट आएको हो।
लगानीकर्ताले राजनीतिक अन्योलता पैदा भएको भन्दै आत्तिएर सेयर बिक्री गर्दा नेप्से सूचक ४.७७ प्रतिशतले घटेर १८३५.६३ अंकमा रोकिएको छ।
यस्तो समयमा लगानीकर्ताले आत्तिएर बेच्नु भन्दा उठाउँदा बढी फाइदा हुने नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बताए।
चुनावी सरकारले संसदको आयु छोट्याउदा अर्थतन्त्रामा ठूलो असर गर्ने भएकाले दोस्रो बजारमा यसको रिफ्लेक्सन भएको विश्लेषकहरु बताउँछन्। सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले अवका दिनमा राजनीतिक एजेन्डाले बढी प्राथमिकता पाउने तर आर्थिक एजेण्डा ओझेलमा पर्ने भएकाले दोस्रो बजारमा असर गरेको हो।
सेयर बजारमा राजनीतिको प्रत्यक्ष असर पर्ने भएता पनि अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र कमजोर हुने हुने अवस्था नभएको साथै सूचीकृत कम्पनीले राम्रै मुनाफा आर्जन गरिरहेकाले दोस्रो बजारका लगानीकर्ता आत्तिन नहुने र संयमित भएर कारोबार गर्नु पर्ने रौनियारको तर्क छ।
केही समय अगाडिदेखि दोस्रो बजारमा उछाल आइरहेको थियो। दोस्रो बजार करेक्सन हुने अवस्थामा भएकाले पनि अहिलेको राजनीतिक उचारचढावले मद्दत गरेको हो।
आइतबार आत्तिएर सेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्ता हाबी हुँदा ८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सेयर बजार घटेको मौका छोप्दै केही लगानीकर्ताले भने उठाइरहेका छन्। बजार सुधार हुन थाले पछि बजार प्रवेश गरेकाले मौका छोप्दै उनीहरुले सेयर बिक्री गरेका हुन्।